Kuona Yako Zvemukati Karenda | Martech Zone
Chitatu, July 6, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kubloga uye zvemagariro midhiya marathon yekugadzira yakakosha zvemukati zuva nezuva kune vateereri vako. Chinangwa ndechekugadzira masimba akakwana uye zvemukati izvo isu tine vaverengi, mafeni kana vateveri vanozopedzisira vashandura kuita vatengi. Izvo zvinotora nguva, dzimwe nguva, saka zvakakosha kuti uchengete ziso rako pane chinangwa chiri pamberi. Imwe nzira yaungaite izvi ndeyokuisa zvemukati khalendari mune yako yemukati manejimendi system.
Iyo yemukati khalendari inokutendera kuti ufunge zvawatumira kunze mune ramangwana kuti iwe ugone kuenderera kumberi pane zvinodiwa zveyako yakazara zvemukati zano. Kuwedzera nguva pfupi yadarika yakaburitsa inonakidza zvemukati khalendari iyo inobvumidza manejimendi kuti awane maonero eruzhinji rwezviri mukati - kusanganisira zvemukati izvo mutongi anofanira kubvumidza. Iwe unoona kuti ini ndanga ndisiri kuita nemazvo zvakanyanya mukuburitsa zvirimo mwedzi wapfuura!
Sezvo ini ndine zvese zviri Kuwedzera blog uye neWordPress blog, ini ndaida kuziva kana paine munhu akavaka yakafanana ficha yeWordPress… uye ivo vane! Ndiyo WordPress Edhisheni Karenda.
Iyo WordPress Edhisheni Chalenda zvakare inokutendera iwe kuti uwedzere zvinyorwa pamwe nekuzvuva nekuzvikanda. Saka kana iwe uchinyatso shingairira vezvenhau maneja, unogona kuzadza ako kalendari mavhiki kumberi uye nekupa izvo zvemukati kune vashandisi vako. Iyi inzira huru yekuona kuti uri kuendesa pane zvido zveruzivo rukuru rwemukati!
Tags: Yekutanga Musika Ongororokutsvagisa kwekutangasoftware kuraira
Iko Kukosha Kwezviri Kushambadzira
Jul 6, 2011 na7:31 PM
Hukuru, ndaitsvaga nzira yekuita izvi neyangu wordpress saiti. Yakanaka webhusaiti zvakare nenzira.